Jean Eric Rakotoarisoa : « Tsy misy lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra mialohan’ ny fotoana » -
AccueilSongandinaJean Eric Rakotoarisoa : « Tsy misy lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra mialohan’ ny fotoana »
Jean Eric Rakotoarisoa : « Tsy misy lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra mialohan’ ny fotoana »
13/07/2018 admintriatra Songandina 0
Notanterahina omaly, tetsy amin’ny Hotel Carlton, ny atrikasa nokarakarain’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) sy ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) mahakasika ny fampahafantarana ny lalàm-pifidianana amin’ireo izay mikasa ny hilatsa-kofidiana avy amina antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena.
Lasa nivadika ho fakan-kevitra sy adihevitra izany atrikasa izany rehefa tontosa soa aman-tsara ny fampahafantarana ilay lalàm-pifidianana ho an’ireo mikasa ho kandida na efa kandida. Tamin’izany indrindra no nivoitra ny mahakasika ny fampielezan-kevitra mialohan’ ny fotoana na ilay adika amin’ny teny baiko « mangalatra départ ».
Nitondra fanazavana mahakasika izany avy hatrany ny teo anivon’ny HCC tamin’ny alalan’ny filohany, Jean Eric Rakotoarisoa, fa tsy misy lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra mialohan’ ny fotoana. « Mbola tsy nisy na aiza na aiza izany lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra mialohan’ ny fotoana izany. Fomba fiteny eo amin’ny tontolon’ny haino aman-jery fotsiny ihany koa io. Ny olona iray mantsy raha tsy lany tamin’ny fifidianana iray dia afaka manomana sahady ny fifidianana manaraka izy. Noho izany tsy voafaritra ny lalàna ny mahakasika izany”, hoy ity filohan’ny HCC ity.
Nohamafisiny fa ny fampielezan-kevitra ofisialy no misy lalàna mifehy ny daty sy andro araka izay voasoratra sy voatondro hanatanterahan’ireo kandidà azy. Na izany aza, hoy i Jean Eric Rakotoarisoa, araka izay fifanarahana misy no ahafahana mametraka ny fanalavana na fampitomboana ny fetr’andro hanatanterahana ny fampielezan-kevitra ofisialy.